Somaliland Oo Jawaab Adag Ka Bixisay Eedo Ka Soo Yeedhay Ra'iisul-Wasaaraha Soomaaliya
Tuesday October 05, 2021 - 19:27:49 in News by Hadhwanaag News
"Xukuumadda JSL waxay bayaamisay in beesha caalamku aanay aaminin dawladda Soomaaliya"
Hargeysa (HWN) Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay hadal ka soo yeedhay Ra’iisul-wasaaraha dawladda Soomaaliya oo ay ka soo yeedheen hadallo farogelin ku ah Somaliland.
War-murtiyeed ay maanta soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland oo ay soo turjuntay Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa lagu sheegtay in Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya ay ka soo yeedheen eedaymo aan sal iyo raad lahayn oo ka dhalatay tallaabadii ka fursan waaga ahayd ee Xukuumadda Somaliland ay dalkoodii dib ugu celisay dad u dhashay Soomaaliya oo sifo sharci darro ah u deganaa degmada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool.
Wasaaradda Arrimaha Dibaddu waxay xaqiijisay inay Xukuumadda Somaliland ku khasbanaatay inay qaado tallaabo, iyadoo haddana la xushmaynaysa xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhawrayo xuquuqdooda.
Xukuumadda JSL waxay bayaamisay in beesha caalamku aanay aaminin dawladda Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha Nabadgelyada gobolka Geeska Afrika.
Ugu dambayn, waxa lagu sheegay war-murtiyeedkaas in Somaliland martigelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira Mandaqada, isla markaana qaxoontigaas ay Somaliland u tahay meel ay ku badbaadeen, waxana Xukuumadda Somaliland ka go’an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka ah kala shaqeyso sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado.